राष्ट्रिय जनमोर्चालाई जिताउन नेकपा (मसाल) को अपिल
नेकपा (मसाल) ले राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन देशव्यापी रूपमा मतदान गर्न जनतासित अपिल गर्दछ । राजमोले जुन नीतिहरू अपनाउँदै आएको छ, आफ्ना नीतिहरूका पक्ष्ँमा जसरी सधै स्पष्ट र दृढ रहँदै आएको छ, त्यसको जुन प्रकारको भूमिका र स्वच्छ छवि रहँदै आएको छ, ती सबै कुराहरूमाथि विचार गर्दा त्यो पार्टी ठूलो राजनैतिक शक्तिका रूपमा संविधान सभामा पुग्यो भने अहिलेको अन्यौल र अनिश्चयताको स्थितिमा राजनैतिक निकास, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, राष्ट्रियताको रक्षा, देशको सर्वाङ्गिण विकास तथा जनताका प्रगतिशील र न्यायपूर्ण मागहरू समेत पूरा गर्नका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने कुरामाथि हामीलाई विश्वास छ ।
संविधान सभाको मुखमा आइपुग्दा पनि तोकिएको समयमा नै संविधान सभाको चुनाव हुनेछ भन्ने कुरामा अझै शङ्का छ । कतिपय पक्षहरूले संविधान सभा चुनाव वहिष्कार गर्ने वा त्यसलाई असफल पार्ने घोषणा गरेका छन् भने प्रकट रूपमा संविधान सभाको चुनावको पक्षमा भएका कतिपय राजनैतिक शक्तिहरूले पनि पराजयको डरले त्यसलाई असफल पार्न षडयन्त्र गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । कतिपय विदेशी शक्तिहरूले पनि देशमा राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था उत्पन्न गरेर आफ्ना स्वार्थहरू पूरा गर्न पनि त्यो चुनावलाई असफल पार्ने षडयन्त्र गर्न सक्दछन् । तर राजमोले लगातार र दृढतापूर्वक संविधान सभाको चुनावलाई सफल पार्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ ।
गत कालमा जुन प्रकारको परिस्थितिमा संविधानको निर्माण भएन, त्यही प्रकारको परिस्थितिमा संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि पनि संविधान नबन्ने सम्भावना पनि छ । तर राजमोले सधै संविधान बन्नु पर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ । त्यसैले राजमो ठूलो शक्तिका रूपमा संविधान सभामा पुगेपछि नै संविधान निर्माणलाई सुनिश्चित गर्न प्रभावशाली भूमिका खेल्न सक्नेछ ।
जातिवादीहरूले जातीय प्रकारको संविधानको निर्माण गर्न पूरा शक्ति लगाइरहेका छन् । मधेशवादीहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार सहित एक मधेश एक प्रदेश वा १�२ वटा भए पनि तराईका छुट्टै प्रदेशहरूको निर्माण गर्न माग गरिरहेका छन् । संविधान सभामा जातिवादी वा मधेशवादीहरू ठूलो सङ्ख्यामा विजयी भए र जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी संविधान बन्यो भने राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्था उत्पन्न हुनेछ । एमाओवादीले पनि जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी शक्तिहरूसित गठबन्धन गरेकाले जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी प्रकारका संविधान बन्ने खतरा धेरै छ । राजमोले त्यस प्रकारको सम्भावनाका विरुद्ध अग्रिम पङ्क्तिमा रहेर सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । त्यसैले जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बन्न नदिन, त्यसबाट देशलाई टुक्रिन नदिन र लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणका लागि पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको विजय राष्ट्रिय र ऐतिहासिक आवश्यकता भएको छ ।
सङ्घीयता, जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश एक प्रदेश, वहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार आदिका विरुद्ध अग्रिम पङ्क्तिमा रहेर सङ्घर्ष गर्दै आएको शक्ति राजमो नै हो । त्यसकारण संविधान सभामा राजमोको वलियो उपस्थितिले नै सङ्घीयता वा त्यससित जोडिएका जातीय राज्य समेतका अवधारणाहरूका कारणले सम्भावित जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको खतरालाई रोक्न सकिनेछ । नेपाल विभिन्न जात�जाति, जनजाति, भाषाभाषी जनताको मेलबाट बनेको एउटा नेपाल राष्ट्र हो । तर माओवादी र अन्य कतिपय पक्षहरूले देशका सबै जाति वा जनजातिहरूलाई वेग्ला वेग्लै राष्ट्रहरूको रूपमा व्याख्या गरेर नेपाललाई वहुराष्ट्रिय देश बताउँछन् । त्यसका साथै एमाओवादीले ती सबैलाई पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार हुनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । त्यसको अर्थ हो� उनीहरूले नेपालका सबै जात�जातिहरूलाई नेपालबाट स्वतन्त्र हुन सक्ने अधिकार हुनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छन् । त्यो स्पष्ट रूपले राष्ट्रिय विखण्डनको नीति हो । राजमोले त्यस प्रकारको नीतिको सम्झौताहीन प्रकारले विरोध गर्दै आएको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दल वा सरकारका नागरिकतासम्बन्धी गलत नीतिहरूका कारणले देश फिजी बन्ने खतरा छ । त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गएमा देश सिक्किम बन्ने खतरा पनि छ । त्यस प्रकारको खतराका विरुद्ध पनि राजमोले लगातार र दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्दै आएको छ ।
देशका अन्य कैयौँ प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरूले प्रशासनको आड, पैसा, भोजभतेर, गुण्डागर्दी आदिका वलमा चुनाव जित्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । जुन शक्तिहरूले त्यसरी भ्रष्ट र गैरराजनैतिक तरिकाहरू अपनाएका छन्, उनीहरूलाई वहुमत वा दुई�तिहाई वहुमत प्राप्त भयो वा संविधान सभाको चुनावमा उनीहरूले महत्वपूर्ण विजय प्राप्त गरे भने देशमा पहिलेको जस्तै इतिहास दोहोरिने, देशमा पुनः अन्यौल र अनिश्चयताको स्थिति उत्पन्न हुने वा गम्भीर प्रकारका दुर्घटनाहरू हुने सम्भावना रहनेछ । निर्वाचन आयोग पनि त्यस प्रकारको भ्रष्ट र गैरराजनीतिक तरिकाहरू रोक्न असफल भएको छ । राजमोले त्यस प्रकारका भ्रष्ट र गैरराजनीतिक तरिकाहरूको विरोध गर्दै आफ्ना नीति र कार्यक्रमका आधारमा राजनीतिक रूपले संविधान सभाको चुनावमा भाग लिँदैछ । भ्रष्ट र गैरराजनीतिक तरिकाले चुनाव जित्ने राजनैनतिक दल वा सङ्गठनहरूले चुनाव जितेर सरकार बनाए पनि उनीहरूद्वारा सही र स्वच्छ प्रशासन र लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण सम्भव हुने छैन । त्यसैले त्यस प्रकारले भ्रष्ट र गैरराजनीतिक तरिकाहरू अपनाउने राजनीतिक शक्तिहरूलाई पराजित गरेर राजमोका उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाएपछि नै देशलाई अग्रगमनको दिशामा लैजानु सम्भव हुनेछ ।
उपरोक्त केही तथ्यहरूमाथि विचार गर्दा पनि अहिलेको संविधान सभाको चुनावमा राजमोका उम्मेदवारहरूको ठूलो सङ्ख्यामा विजय र संविधान सभामा उनीहरूको वलियो उपस्थितिको निर्णयात्मक महत्व भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । देशको राजनीतिमा कुन दलको कति शक्ति छ भन्ने कुरालाई भन्दा कुन दलका नीतिहरू देशका लागि कति घातक वा सहायक हुन सक्दछन् भन्ने कुरामाथि ध्यान दिएर नै कुनै दललाई मत दिने वा नदिने कुराको निर्णय गर्नु पर्दछ । चुनावका बेलामा कुन राजनैतिक दल कति शक्तिशाली छ भन्ने आधारमा होइन, कसका नीति कति सही छ भन्ने कुरामाथि विचार गरेर नै मतदान दिनु पर्दछ ।
कुनै राजनीतिक सङ्गठन कति शक्तिशाली छ वा छैन ? त्यो कुराको निर्धारण जनताको भोटले पनि गर्दछ । गत कालमा ठूला वा शक्तिशाली भएका राजनीतिक सङ्गठनहरूलाई नै जनताले धेरै मत दिएर पुनः शक्तिशाली बनाए भने उनीहरूका गलत नीतिबाट झन् गलत परिणामहरू निस्कनेछन् । त्यसकारण गत कालका जुन प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूका गलत नीतिहरूका कारणले संविधानको निर्माण हुन सकेन, देशमा अन्यौल र अनिश्चयताको स्थिति उत्पन्न भयो, निर्दलीय सरकारको स्थापना हुने स्थितिको सृजना भयो, एक वा अर्को गर्दै कैयौँ राष्ट्रघाती सन्धिहरू भए, नागरिकतासम्बन्धी राष्ट्रघाती नीतिका कारणले देश फिजी बन्ने खतरा बढ्दैछ, जनताले भोट दिएर पुनः उनीहरूलाई नै शक्तिशाली बनाएमा त्यसबाट गम्भीर दुष्परिणामहरू हुने र त्यसको साङ्घातिक असर जनताको जीवनमा पर्ने कुरा निश्चित छ । त्यस प्रकारको गल्ती भयो भने अन्तमा जनता धेरै नै पछुताउनु पर्नेछ । त्यसकारण आगामी संविधान सभाको चुनावमा त्यस प्रकारको गल्ती हुन नदिन सम्पूर्ण जनता सचेत हुनु पर्ने आवश्यकता छ ।
राजावादीहरूले बढी सफलता प्राप्त गरेमा गणतन्त्र समाप्त हुने र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको खतरा बढ्नेछ । अहिले राजावादीहरूले हिन्दू धर्मको कुरा उठाएर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नका लागि पूरा शक्ति लगाइरहेका छन् । राजावादीहरूले चुनावमा उनीहरूले दावी गरे जस्तो सफलता प्राप्त गरे भने देश प्रतिगमनतिर जाने खतरा हुनेछ । मधेशवादीहरूले बढी सफलता प्राप्त गरेमा देशको विखण्डनको खतरा बढ्नेछ । माओवादीले बढी सफलता प्राप्त गरे लोकतन्त्र समाप्त हुने, देशमा अधिनायकवादी शासन कायम हुने र गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघात हुने खतरा बढ्नेछ । एमाओवादीले जातिवादी र मधेशवादी समेतसित गठबन्धन गरेर दुई�तिहाई वहुमत प्राप्त गर्न अभियान चलाइरहेको छ । उनीहरूको त्यस प्रकारको अभियान सफल भएमा देशमा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी संविधान बन्ने तथा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा समेत गम्भीर आँच पुग्नेछ । एमाओवादीको कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रणालीबाट देशमा अधिनायकवादी शासन कायम हुने खतरा पैदा हुनेछ । त्यसकारण अहिले कसको कति शक्ति छ भन्ने आधारमा होइन, कसको नीति कति गलत वा सही छ ? त्यो आधारमा नै कुनै राजनैतिक पार्टी वा सङ्गठनका उम्मेदवारहरूलाई भोट दिने वा नदिने निर्णय गर्नु पर्दछ । त्यसरी हेर्दा राजमोले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएका नीति र त्यसको राजनीतिक भूमिकामाथि ध्यान दिँदै त्यसलाई ठूलो सङ्ख्यामा विजयी बनाउनु नै देश र जनता तथा देशको भविष्यका लागि सबैभन्दा सही कार्य हुनेछ ।
गत कालमा अन्यौल र अनिश्चयताको स्थिति उत्पन्न हुनु, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण नभैकन संविधान सभाको विघटन हुनु कतिपय राष्ट्रघाती सन्धिहरू वा नागरिकतासम्बन्धी राष्ट्रघाती अध्यादेश वा कानुनहरू बन्नु, निर्दलीय सरकारको गठन हुनु, देशमा सङ्घीयतावादी सोचाइ वा गतिविधिहरू बढेर जानुका पछाडि एमाले र ने.का. का गलत नीतिहरू पनि धेरै नै जिम्मेवार छन् । त्यसकारण चुनावमा उनीहरूलाई मिल्ने सफलताबाट गत कालको जस्तो स्थिति दोहोरिने सम्भावना रहनेछ । तर अहिलेको देशको राजनैतिक स्थितिमाथि समग्र रूपले विचार गर्दा एमाओवादी, मधेशवादी र जातिवादी गठबन्धनबाट नै सबैभन्दा बढी खतरा छ । त्यसकारण हाम्रो मुख्य जोड त्यो गठबन्धनका कारणले पैदा भएको खतरालाई रोक्ने वा उनीहरूलाई दुई�तिहाई वा वहुमत आउन नदिनेतर्फ नै हुनु पर्दछ ।
एमाओवादी हाम्रो नजिकको मित्रशक्ति हो । तर त्यसले जुन प्रकारको जातिवादी नीति अपनाएको छ, जातिवादी र मधेशवादीहरूसित गठबन्धन गर्ने नीति अपनाएको छ, नागरिकतासम्बन्धी राष्ट्रघाती नीतिहरू अपनाएर देशलाई फिजीकरणको बाटोमा लैजाँदैछ, भारतपरस्त नीति अपनाएर देशको राष्ट्रियतामा गम्भीर प्रकारको आँच पु�याउने काम गरिरहेको छ, कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रणालीबाट देशलाई अधिनायकवादतिर लैजाने प्रयत्न गर्दैछ, राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठूलो पैमानमा दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको नीति अपनाएको छ, मानवअधिकारको हनन वा अपराधजन्य कारवाहीहरूका लागि दोषी व्यक्तिहरूलाई बचाउन प्रयत्न गर्दैछ, उनीहरूको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनले वहुमत वा दुई�तिहाई वहुमत प्राप्त गरेमा त्यसबाट देशमा गम्भीर प्रकारको कुठाराघात पुग्नेछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट र दृढ मत छ । त्यो सम्भावनाप्रति दूरदर्शितापूर्वक विचार गरेर मतदान गर्न हामीले जनतासित अपिल गर्दछौँ ।
इतिहासमा कैयौँ पल्ट यस्ता घडीहरू आउँछन्, जुन बेला जनताले चुनावमा आफ्नो मताधिकारको सही प्रयोग नगरेमा गम्भीर प्रकारका दुष्परिणामहरू हुने गर्दछन् । विश्वको इतिहासमा जनताले आफ्नो मतको ठीकसित प्रयोग गर्न नसक्दा त्यसका कैयौ साङ्घातिक परिणामहरू हुने गरेका कैयौँ उदाहरणहरू छन् । फ्रान्समा नेपोलियनले युद्धमा प्राप्त गरेको सफलताहरूबाट प्रभावित भएर त्यहाँका जनताले राष्ट्रपतिको चुनावमा उनलाई विजयी बनाए । तर त्यसको परिणामस्वरूप त्यहाँ गणतन्त्रको अन्त भएको थियो र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गरिएको थियो । जर्मनीमा हिटलरले प्रदर्शन गरेको अन्धराष्ट्रवादी र जातीय द्वेषको लहर, आतङ्कवादी कार्यशैली र ठूलो तडकभडकसित गरिएको चुनाव प्रचारका कारणले ठूलो सङ्ख्यामा जनताले हिटलरको पार्टीलाई भोट दिए र त्यसको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा विजय भयो । तर त्यसको परिणाम के भयो ? विश्व इतिहासमा त्यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यसको परिणामस्वरूप जर्मनीमा फाशिष्ट शासन कायम भयो, लाखौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू मारिए वा उनीहरूलाई घोर यातना दिइयो । विश्वका कैयौं देश र करोडौँ जनता फासिवादी आक्रमण, युद्ध वा आतङ्कका शिकार भए । अहिले नेपालमा जनताले आफ्ना मतको सही प्रयोग गर्न नसके हाम्रो देशमा एक वा अर्को प्रकारले त्यही प्रकारको इतिहास दोहोरिन सक्नेछ । त्यसप्रति उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउन पनि हाम्रो पार्टीले सम्पूर्ण जनतासित अपिल गर्दछ ।
माओवादीको संविधान सभाको चुनावलाई असफल पार्ने घोषणालाई पनि हाम्रो पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ । हाम्रो सुरुदेखि नै यो मत रहेको थियो कि माओवादी समेतसित सहमति कायम गरेर संविधान सभाको चुनावलाई सम्पन्न गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । तर त्यो प्रयत्न सफल नभएको र माओवादी, चार दल र सत्ता पक्षका बीचमा भएको वार्ता भङ्ग भएकोमा हाम्रो पार्टीलाई दुःख लागेको थियो र त्यो बेला नै हामीले त्यो कुरा सार्वजनिक रूपले नै स्पष्ट गरेका थियौँ । त्यो वार्ता सफल नभए पनि यो कुराप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान गएको छ कि संविधान सभाको चुनाव हुन सकेन भने भविष्यमा पुनः संविधान सभाको अर्को चुनाव हुन धेरै नै मुश्किल हुनेछ वा हुने नै छैन भने पनि हुन्छ । संविधान सभाको चुनाव भएन भने लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यहरूमा वाधा पुग्नेछ । त्यो स्थितिले क्रान्ति होइन, प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्नेछ । राजावादीहरूले संविधान सभाको चुनाव हुन नसके वा संविधानको निर्माण हुन नसकेमा २०४७ सालको संविधान ब्युताउने कुरा गरिरहेका छन् । जसको अर्थ राजतन्त्रको पुनस्र्थापना नै हुनेछ ।
माओवादीले राष्ट्रियतामाथि जुन जोड दिने गरेको छ, त्यसलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिँदै आएको छ । त्यसका लागि उनीहरूले गर्ने आन्दोलनसित एक्यवद्धता कायम गर्ने हाम्रो पार्टीको नीति रहेको छ र भविष्यमा पनि रहनेछ । उनीहरूले एमाओवादीको नवसंशोधनवादी नीति, भारतपरस्त र राष्ट्रघाती नीतिहरू, निर्दलीय सरकारको स्थापना, नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रघाती नीति, उनीहरूले व्यापक रूपमा गरेको भ्रष्टाचार, उनीहरूभित्र नवधनाड्य वर्गको उत्पत्ति समेतको जुन विरोध गरेका छन्, त्यसको पनि हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्ने गरेको छ । तर संविधान सभाको चुनाव असफल भयो वा लोकतान्त्रिक संविधान बन्न सकेन भने देशमा अहिलेको भन्दा गम्भीर प्रकारको अन्यौल र अनिश्चयताको स्थिति उत्पन्न्न हुनेछ । त्यो अवस्थामा देशमा विदेशी शक्तिहरूको हस्तक्षेप र भूमिका झन् बढेर जानेछ । त्यो स्थितिमा राष्ट्रियतामाथिको खतरा झन् बढेर जानेछ । त्यसैले संविधान सभाको चुनावलाई असफल पार्ने कुनै नीति नअपनाउन हाम्रो पार्टीले वारम्वार माओवादीसित अनुरोध गर्दै आएको छ र अहिले पनि गर्दछ ।
अन्तमा, नेकपा (मसाल) ले माथि उल्लेखित सबै तथ्यहरूमाथि ध्यान दिँदै का. चित्रबहादुर के.सी. ले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूलाई गिलासमा भोट हाली विजयी बनाउन सम्पूर्ण जनतासित अपिल गर्दछ ।
मिति ः २०७० कार्तिक २५ गते